I-Bitcoin yindlela enomdla yemali ethe yavela ukulungisa iingxaki zezoqoqosho ezinxulumene neMali eseMbindini. Ngenxa yokuba i-Bitcoin ayilulo uhlobo lwemali ebonakalayo, kunokuba nzima ukusongela ingqondo yakho ngendlela esebenza ngayo. Yinto elula ngokwenene.
indawo engaphambili yeekati
I-Bitcoin luhlobo lwemali yedijithali eyasekwa ngexesha lobunzima bezezimali ngo-2009. NgoSeptemba ka-2008, uLehman Brothers wafaka isibhengezo njengowona mbhodamo mkhulu embalini. Ukuwa kwesi sigebenga kwaqala imeko yezezimali kwilizwe jikelele. Kwiinyanga ezimbalwa kamva, uB Bitcoin wazalwa. Njengenkcazo esisiseko, i-Bitcoin yimali ye-intanethi engenabhanki.
Isebenza njani iBitcoin?
Ngokungafaniyo neDollar, i-Euro, iYen, kunye nezinye iindlela zeMali eQhelekileyo, iBitcoin ihlelwa njenge Imali eyabelwe ilizwe . Iimali eziqhelekileyo ezichaza uqoqosho lwethu lwale mihla zibekwe emabhankini kwaye zilawulwa ngurhulumente (ekhokelela ekuchongeni iMali eseMbindini). Akukho bhanki okanye igunya eliphambili elilawula iBitcoins. I-Bitcoins zilawulwa yinethiwekhi yabasebenzisi abalawula kwaye baqinisekise ukuthengiselana kwemali.
Nangona iBitcoin ibonakala ngokungafaniyo neefom zemali oqhele ukuzisebenzisa, isasebenza njengemali esetyenziswa ngabantu yonke imihla. Wena ukunika i-Bitcoin yakho komnye umntu kwaye bona, bona, bakunika iimpahla okanye iinkonzo. Ungayithengisa i-lawnmower kummelwane wakho ngeBitcoin, ngokungathi ungayithengisa ngemali ebonakalayo.
Olunye uncedo olukhulu olunxulunyaniswa neBitcoin yinto yokuba ayisekelwanga embindini kwaye ayisekelwanga kwimali yemveli. Okwangoku, imali yakho ilawulwa lilizwe ohlala kulo.
ndingayithatha itylenol ngelixa ndincancisa
Umzekelo, ukuba uhlala eUnited States kodwa ufuna ukuthengisa umatshini wakho othengisa ingca komnye umntu eJapan, ngekhe uwuthengise ngeYen yaseJapan kuba iUnited States isebenzisa iidola. Kodwa i-Bitcoin yimali yehlabathi jikelele. Ukuba umntu e-United States uthenga into kumthengisi waseJapan kwaye ahlawule ngeBitcoin, akukho zinga lokuguqulwa, akukho kulibaziseka kwebhanki, kwaye akukho mrhumo webhanki.
Imali ithunyelwa kwangoko kwaye akukho ntlawulo ziqhotyoshelweyo. Ibhanki ivaliwe? Iiyure zebhanki azichaphazeli iBitcoin kuba akukho bhanki ilawula imali yakho. Xa siziphelisa iibhanki kwaye sikwazi ukuthumela indlela enye yokuhlawula ngaphandle kokuma kwejografi, ngokwenene senza uqoqosho lwehlabathi.
Emva kokuba uthenge iimpahla okanye iinkonzo usebenzisa iBitcoin, ugqibile. Uyenzile ukuthenga kwakho kwaye ungahamba malunga nosuku lwakho. Nangona kunjalo, kwenzeka ntoni emva kokuthengiselana kwakho yeyona nto iseta iBitcoin ngaphandle kweeMali eziPhakathi.
Intengiselwano yakho, nayo yonke enye into eyenziwa yiBitcoin, ingene kwaye irekhodwe kwinto ebizwa ngokuba yiBlockchain. IBlockchain yileja ebhalwe esidlangalaleni yazo zonke iintengiselwano zeBitcoin. Okwangoku, abanye abasebenzisi beBitcoin ekubhekiswa kubo njengabavukuzi, baqinisekisa intengiselwano nganye kwiBlockchain.
Kukho inkxalabo malunga nokungaziwa kweBitcoins. Abaninzi ekuqaleni babekholelwa ukuba yindlela yokuhlawulela iimpahla okanye iinkonzo ezingenakunxulunyaniswa nabantu. Nangona kunjalo, nge Uvavanyo lukaRoss Ulbricht , oku kungqineke kuyinyani ebubuxoki. U-Ulbricht wabanjwa ngokuthengisa iziyobisi kunye nokusebenzisa iBitcoin kwintengiselwano.
Yonke intengiselwano ibhalwe kwiBlockchain. Ngelixa eyona njongo iphambili ye- ukulandelela ukuthengiselana kweBitcoin Kukuthintela ukwenziwa komgunyathi, ikwenza iinkcukacha zesivumelwano sakho ibe ngumcimbi werekhodi yoluntu. Ukuba eyakho Idilesi yeBitcoin unokulandelwa kuwe, emva koko intengiselwano yakho ayaziwa.
Kude kube nini u-benadryl angene
Xa umgodi eqinisekisa inani elichaziweyo lokuthengiselana, bahlawulwa nge-Bitcoin esandula ukwenziwa (okanye ebunjiweyo). Le nkqubo yindlela iBitcoins ehlala ikhuselekile ngayo kunye nendlela iBitcoins eyongezwa ngayo ekujikelezeni. Le nkqubo isebenza ngendlela efanayo naleyo I-United States iMint isebenzisa ukuprinta imali ukongeza iiDola ekujikelezeni. Kukho ngaphezulu kwezigidi ezili-16 zeBitcoins ezijikelezayo. Njengoko ii-Bitcoins ezininzi zongezwa ekusasazeni, izinga lokudala liyancipha. Inani le I-Bitcoins ekusasazeni kulindeleke ukuba ingaze idlule kwizigidi ezingama-21 , ngenxa yokuhla kwemodeli yokudala.
Ixesha lokuhamba uguqule umvuzo wakho kwi-Bitcoin? Mhlawumbi okwangoku. Kukho abathengisi abaliqela kunye neewebhusayithi ezamkela iBitcoin (iOverstock.com, indlela engaphantsi, kunye nokutya okupheleleyo yimizekelo embalwa), kodwa uninzi lwamashishini alukabhalisi okwangoku.
Umcimbi omnye ngeBitcoin, xa kuthelekiswa nezinye iimali, kukuba iBitcoin ixabisa kuphela into abantu abazimisele ukuyibhatala. I-Bitcoins ayixhaswanga zezinye izinto ezinjengegolide, ke ixabiso leBitcoin laziwa ngokutshintsha-tshintsha kakhulu. Ngasekupheleni kuka-2009, i-Bitcoin yayixabisa malunga neesenti ezintlanu. Namhlanje, iyatshintsha phakathi kwamawaka amabini anesithathu amawaka eedola. Ingxoxo-mpikiswano iyaqhubeka ukuba nomsindo malunga nokuba iBitcoin iya kubamba njengeyona ndlela iphambili yemali.
isetyenziselwa ntoni i-remdesivir
Ithetha ntoni i-afc kunye ne-nfc
venlafaxine kwandiswe ukukhutshwa kwe-150 mg
utywala kunye noxinzelelo lwegazi amayeza
I-laxatone yeempembelelo zeekati
Izicwangciso zezinyosi zenyosi pdf
isenzi ir ngesiSpanish